कसरी ट्राफिक पुलिस निर्णय नम्बर द्वारा ठीक छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कसरी आदेश पत्ता लगाउने ट्राफिक पुलिस ठीक छ के द्वारा आदेश छ?
यो जानकारी पत्ता लगाउनको लागि धेरै सरल छ, ट्राफिक पुलिस ठीक छ लि checked्कमा, आधिकारिक वेबसाइटमा जाँच गरिन्छ।
यस प्रक्रियामा कुनै पनि जटिल छैन, हातमा जरिमाना गर्नु र सबै आवश्यक डाटा प्रविष्ट गर्न पर्याप्त छ।
यस्तै चीजहरू प्राप्त गर्नु निश्चय पनि धेरै अप्रिय छ, खास गरी जब हरेक पैसाको हिसाबमा गणना हुन्छ, तर अझै कार छ भने तपाईंले कहिलेकाँही यसलाई तोड्नुपर्दछ, कहिले काहिं दुर्घटनामा पनि।
जरिमाना के हो भनेर पत्ता लगाउन, तपाईले राज्य ट्राफिक निरीक्षकको आधिकारिक वेबसाइटमा जानु पर्छ। त्यहाँ तपाईं यो जानकारी अनलाइन स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंलाई केवल राज्य दर्ता चिन्ह र पंजीकरण प्रमाणपत्रको श्रृंखला र संख्या थाहा पाउनु आवश्यक छ। यहाँ साइट छ: http://www.gibdd.ru/check/fines/
अब यो उद्धरण प्राप्त गर्न असामान्य छैन; खुशीको कोट; वा ट्राफिक पुलिसबाट सिधै जरिवाना लिनुहोस्। सबै फाइनहरू जाँच्न र तपाईसँग कस्तो जरिमाना छ त्यसको बारेमा सतर्क हुन सल्लाह दिइन्छ। हुनसक्छ ठीक त्यहाँ पहिले नै छ र तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा छैन। सबै पछि, पत्रहरू केहि पछि आउँदछ।
ट्राफिक पुलिसको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाइँ तपाइँका सबै जरिवाहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, जरिवाना समयमै तिर्नु आवश्यक छ, अन्यथा जरिवाना लिन सक्छ।
राज्य ट्राफिक इन्स्पेक्टर: www.gibdd.ru को आधिकारिक वेबसाइटमा निर्णय नम्बरले तपाईलाई दण्ड तिर्नुपर्ने कुरा थाहा पाउन सक्छ। यो गर्न, तपाईंको कारको राज्य पंजीकरण प्लेट र पंजीकरण प्रमाणपत्रको श्रृंखला र संख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्।
सब भन्दा सहि र जानकारीमूलक स्रोत pgu.mos.ru हो
यस सेवाले दुबै भुक्तानी गरिएको र भुक्तान गरिएको जरिमानाहरूको पूर्ण विवरण प्रदान गर्दछ।
ट्राफिक पुलिस वेबसाईटमा तपाईले जारी गरेको सबै जरिवानामा पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, सूचना सहित जुन कसले अपराध लगाईएको छ।
सामान्यतया, कुनै पनि कार मालिकले नियम बनाउनु पर्छ यो साइट को लागी प्रत्येक केही महीनाहरु को लागी जानेछ र जाँच गर्न को लागी ऊ जरिवाना छ कि छैन।
तपाईं जानु अघि जरिवाना तिर्नु तपाईंले यसलाई जाँच गर्न आवश्यक छ, जानकारी फेला पार्नुहोस्।
यातायात पुलिसले निर्णय नम्बरका लागि के ठीक छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि:
ट्राफिक पुलिस वेबसाइटमा जानुहोस्;
तपाईंको व्यक्तिगत खातामा साइटलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यो द्रुत रूपमा गरिनु पर्छ, अन्यथा जरिवाना आउन सक्छ।
यो गर्नका लागि, तपाईं वेबसाइट www.gibdd.ru वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यसमा जानुहोस्, जुन पछि हामी तपाईंको क्षेत्र संकेत गर्दछौं, दायाँपट्टि पेनल्टी चेक हुनेछ (क्लिक नगरौं) र fields फिल्डहरू भर्नुहोस्:
quot; राज्य दर्ता चिन्ह ;;
quot; श्रृंखला र दर्ता प्रमाणपत्रको संख्या;
quot; चित्रकोटबाट पानी नम्बरहरू;
अनुरोध क्लिक गर्नुहोस्, र जानकारी एक भुक्तानी गरिएको जरिवानाको उपस्थितिमा जारी गरिनेछ, विशेष जरिवानाको उल्लंघनको लागि लेख सहित।
म आफैलाई जवाफ दिनेछु। यस समस्याको भर्खर सामना गर्यो र समाधान भेटियो।
रूसको राज्य सेवाको मुख्य पोर्टलमा, सबै जरिवाना प्रदर्शित हुन्छन् र जसको उल्लंघनको लागि र जहाँ ठाउँ उल्लंघन रेकर्ड गरिएको थियो।
हामी त्यहाँ लिंक द्वारा पार
23 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,301 प्रश्नहरू।